राम्रो काम लगाईदिन्छु भन्दै यसरी काठमाडौंमै ‘सर्जिकल अट्याक’ गरेर किड्नी लुटियो ! | Hulaki Online
राम्रो काम लगाईदिन्छु भन्दै यसरी काठमाडौंमै ‘सर्जिकल अट्याक’ गरेर किड्नी लुटियो !
काठमाडौं,पुस-१४ । गोरखा मुचोकका दीपक नेपाली रोजगारीका लागि पोखरामा बस्दै आएका थिए । मजदुरी काम गर्ने १९ वर्षका उनको भेट कास्कीका भीमप्रसाद न्यौपानेसँग भयो ।